Muxuu ku Caan yahay Hoteelkii Xamdi Lagu Dilay ? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Muxuu ku Caan yahay Hoteelkii Xamdi Lagu Dilay ?
Muxuu ku Caan yahay Hoteelkii Xamdi Lagu Dilay ?
Waxaan Waqti iyo Juhdi dheer geliyay Tan iyo markii Xamdi lagu kufsaday laguna dilay kadibna Dabaq dheer laga soo tuuray oo ay kasoo wareegatay Muddo Caawa Ku saddex ah weliba falku na uu dhacay Maalin Cad oo aan habeen ahayn waxaana Idinla wadaagi doonaa Hotelka iyo cidda ugu badan oo Macmiilka u ahayd !
Baaristaan iyo xogtaan helay dadka aan wax ka waydiiyey oo ila wadaagay waxaa kamid ah ; Shaqaale Horey uga tagay Hoteelka , dad macaamiil Hore u ahaa , macaamiil hadda kuxirnayd , dad qaraabo la ah Mulkiilaha hotelka , kuwo kamid ah dadkii daganaa hotelka balse ilaa shalay isaga guuray iyo Guud ahaan Bulsho badan oo Reer Muqdisho ah Hotelkana waayadan Danbe u dhuun daloolay..
Waa Hoteel Caan ah Korkiisana waxaa dagan Rag caan ah oo isticmaala Balwadda noocyadeeda kala duwan, waxaa ragaas ugu taga goobta Haween ayaguna La isticmaala balwadda , qayb haweenkaas kamid ah ayaa waxay sameeyaan shirqool ay u dhigaan gabdhaha kale ee aan ayagoo kale ahayn .
Goobta sare ee ay ragaas iyo dumarkaas fariisinka u ah waxaa weheliya in ragga qaarkood dagan yihiin qolal kamid ah Hotelka ayna markay rabaan inay gabdhaha Caadiga ah ee aan balwadda lahayn shukaansanayaan ay la tagaan markaasna ay waxay rabaan ku sameeyaan.
Dabinka Ragaani Gabdhaha asturan u dhigaan waxaa kamid ah in Cabitaanka ay ugu daraan daroogo miyirka iyo maanka qaada, markaas kadibna ay siday raban ka yeelaan , waxaa Tobonaan jeer dhacda in Hablaha inta Sharaabka Kiniino loogu daro Galmo wadareed lagu sameeyo, xataa waxaa Jiro Kuwo Uur loogu yeelay falkaas Kadibna Guryahoodii ka doorbiday inay daroogadaas iyo Hooygaas baaqi kusii ahaadaan.
Baarista arinkaan inta aan Ku guda jiray ayaa waxaa la ii sheegay in dumarka goobtaan dagani mararka qaar soo shirqoolaan gabdho kale oo ay aqoon guud isku leeyihiin kadibna ay isaga dhigaan kuwo casumaad ìyo sharaab la wadaagayaa halkaas oo kiniinada miyirka qaada ay ugu daraan kadibna u xareeyaan Rag ayagu Meesha ka ugaarsada .
Waxaa la ii xaqiijiyey oo dad Goobtaan Muddo Yaqaanay ii sheegeen in marka gabdhaha inta la daroogeeyo ay ragaasi ka adeeganayaan ay ka duubaan Muuqaalo iyo Sawiro ansha xumo kuwaas oo ay hadhow haday isku daydo inay sheegto ama fashiliso loogu hanjabo inay faafin doonaan kadibna ay sidaas ku aamusto ayadoo dhibane ah.
Ujeedka Muuqaalada ragaani u duubtaan ayaa la iigu sheegay Laba qasdi ama ujeedo ;
1-marka Hore ujeedkooda ayaa ah lacalla hadii gabadhu in haday dhacdo inay shaaciso falka lagula kacay ayaa lagu baqdin geliyaa muqalada xun xun ee kaga duubay, waxaana lagu wargeliya hadii afkeeda kala qaado in Fadeexo kudhici doonto.
2-marka labaadna ujeedka raggaan ayaa la iigu sheegay in hadiiba gabadhu aysan dacwoon oo afkeeda xirato ay marka ay rabaan u yeertaan haddii ay isku daydo inay diido u tagistoodana ay sidoo kale ugu hanjabaan inay Muuqaalo ka hayaan sidaasna Gabadhu door bido inay mar walba u tagto isla markaasna waxay rabaan ka fushadaan si ay iskaga bad baadiso in muuqaalo foolxun laga faafiyo.
Weli waan wadaa Xog baarista Arinkaan Waxaana idinla wadaagi doonaa Qaybaha danbe iyo cidda badnayd ee hotelkaan kuxirnayd macmiishiisuna ahayd.
La wadaag Umadda kale si ay ula socdaan arinkaan ..
Waxaa Xogtaan Uruuriyey Bashiir Shaaciye ( Qoraa Ahna Saxafi Madax Banaan ).
Previous articleXisbiga Moderatka oo soo bandhigay Sharciyo Cusub oo lagu tarxiilayo Kooxaha gangiska
Next articleWaa kuma Ra iisal wasaaraha Cusub ee Soomaaliya
Jaamac Caydiid “ Muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku lool Turkiga xaq...